Guddoomiyaha Gobolka Banaadir oo xariga ka jaray Xarunta Waaxda Towqiif ee Yaaqshiid – STAR FM SOMALIA
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir oo xariga ka jaray Xarunta Waaxda Towqiif ee Yaaqshiid
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale ayaa xariga ka jaray xarunta Waaxda Towfiiq oo ah waaxda ugu weyn degmada Yaaqshiid.
Munaasabad ku saabsan xarig jaridan ayaa waxaa ka qeyb galay Mas’uuliyiinta Gobolka iyo kuwa degmooyinka Gobolka Banaadir.
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir oo khudbad ka jeediyay munaasabadii xarig jarida ayaa u mahad celiyay hey’addii ka caawisay dhismaha waaxdan, isagoo sidoo kale ammaanay kaalinta dadka deegaanka, waxaana uu tilmaamay in loo baahan yahay in shacabka dhistaan waaxyaha loogu adeegayo.
Guddoomiyaha degmada Yaaqshiid Cusmaan Maxamed Cadaawe ayaa sheegay in Waaxdan ay ka mid tahay waaxyaha ugu muhiimsan ee degmada Yaaqshiid.
Maamulkii hore ee Gobolka Banaadir ayaa ka hirgeliyay inta badan degmooyinka xarumaha degmooyinka iyo waaxyaha oo dib u dhis iyo dayactir lagu sameeyay.
Axmed Madoobe oo Baarlamaanka weydiistay in la siiyo 3 bilood oo dheeraad ah, si uu ugu soo dhiso Golaha Wasiirada
Wasiir Odawaa “Todobaadka soo socda ayuu furmayaa shirka maamul u sameynta Hiiraan iyo Sh/Dhexe”